XIDIGII KUBADA CAGTA AFRIKA IYO ADDUUNKA GEORGE WEAH OO GUULAYSTAY DOORASHADII MADAXWEYNAHA LIBERIA.+SAWIRRO | Saxil News Network
XIDIGII KUBADA CAGTA AFRIKA IYO ADDUUNKA GEORGE WEAH OO GUULAYSTAY DOORASHADII MADAXWEYNAHA LIBERIA.+SAWIRRO
Liberia:-(saxilnews.com) Doorashadii shalay subax ka bilaabatay dalka Liberia ayaa waxaa lasoo warinayaa in natiijadeedu soo baxday oo uu xilka madaxweynaha ku guuleystay ciyaaryahan hore oo xulka dalkaasi ka mid ahaa kaas oo lagu magacaabo George Weah (51-jir) .
Mr. Weah ayaa ka guuleystay musharixii la tartamayay ee Joseph Boakai, waxaa isna sannadkii 2005-tii oo uu isu soo sharraxay xilka madaxweynenimo ka qaaday haweeneyda iminka madaxweynaha ah ee Ellen Johnson-Sirleaf.
Madaxweynahan cusub ee Liberia ayaa ahaa ninka ugu laacibsanaa kubadda Afrika xilligiisii sagaashameeyadii, waxaana uu sannadkii 1996-dii ku guuleys kubadda dahabka ah ee Ballon d’Or ee laga baxsho salka Fransiiska.
Ka hor inta aanu ka fadhiisan ciyaaraha sannadkii 2003-dii ayaa waxaa uu usoo ciyaaray kooxaha Milan, PSG iyo Manchester City ee qaaradda Yurub. Weah ayaa ugu mahadceliyay shacabka reer Liberia kalsoonida ay siiyeen, waxaana uu u ballan qaaday in uu kasoo dhalaali doono masuuliytadda ay u dhiibteen ee xilka madaxweynenimo.